Chishanu 13th Marathon Inosvika paAMC Zuva rose Chivabvu 13 - iHorror
musha	Horror Varaidzo Nhau	Chishanu 13th Marathon Inosvika paAMC Zuva rose Chivabvu 13
Chishanu 13th Marathon Inosvika paAMC Zuva rose Chivabvu 13
by Trey Hilburn III Dai 12, 2022
by Trey Hilburn III Dai 12, 2022 1,201 maonero
Ndeipi nzira iri nani iripo yekupemberera NeChishanu iyo 13th pane kuita marathon chaizvo Chishanu Chishanu mafirimu. AMC inonyatsoziva zviri kuitika nekutepfenyura chikamu chikuru chefranchise uye nekupinda mune nitty gritty ye7 yemafirimu.
Aya marudzi emarathon anogara achinakidza kunyangwe kana iwe uine chinhu chose pablu-ray nechekare. Pane chimwe chinhu pamusoro pekutora chikamu mumarathon seuyu chinopa mubairo. Ini ndinofungidzira kutora chikamu chechimwe chinhu chiri kuitwa nenharaunda inotyisa sese.
Iyo purogiramu ye NeChishanu iyo 13th pa AMC inoenda seizvi:
10:01 am ET – Chishanu 13th: The Final Chapter
12 pm ET - Chishanu 13th Chikamu VIII: Jason Anotora Manhattan
2 pm ET - Chishanu 13th Chikamu VII: Ropa Idzva
4 pm ET - Chishanu chegumi netatu Chikamu VI: Jason Anorarama
6 pm ET - Chishanu 13th (1980)
8 pm ET - Chishanu 13th Chikamu 2
10 pm ET - Chishanu 13th Chikamu 3
Chero vari kutamba Chikamu III uye Final Chapter, munoziva ndiri mukati. Ndinodawo kuti vari kukanda mu schlocky Jason Anotora Manhattan. Nekuti, kutaura chokwadi ndiani asingadi kutarisa iyo zvisinei nekukanganisa kwayo.
Ndichakuonai mese paTwitter mangwana kune ino. Tinogona kupemberera Chishanu 13th uye kudya pitsa uye kunyange kuita yedu yakanakisa Crispin Glover kutamba mafambiro.